Jubbaland oo sheegay in Farmaajo uusan weli wareejin mas’uuliyadii amiga, balan qaadkiisii shalay ku tilmaamay marin habaabin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Jubbaland oo sheegay in Farmaajo uusan weli wareejin mas’uuliyadii amiga, balan...
Jubbaland oo sheegay in Farmaajo uusan weli wareejin mas’uuliyadii amiga, balan qaadkiisii shalay ku tilmaamay marin habaabin.
Maamul goboleedka Jubbaland ayaa dhaliilay hadalkii shalay ka soo yeeray Madaxweyne waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejinayo Ra’isul Wasaaraha xukuumadda xil-gaasiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Wasiirka Warfaafinta ee maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo wareysi siiyey VOA ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan weli wareejin mas’uuliyadii amiga, isagoo balan qaadkiisii shalay ku tilmaamay marin habaabin.
Sidoo kale Magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Beledweyne, iyo gobolka Gedo ayuu tusaale u soo qaatay, in ciidamo ka wada tirsan dowladda ay isku hor fadhiyaan, isla markaana Rooble uusan weli awood u laheyn inuu kala qaado.
Previous article3 Walaalo ah oo dgowr Saacad gudahood lagu dilay Dalka Mareykanka
Next articleGolaha wasiirrada Itoobiya oo soo jeediyey qaraar Jabhadaha TPLF iyo OLA loogu aqoonsanayo argagixiso
Imaaraatka Carabta, Burundi iyo Rwanda ayaa lagu daray "liiska cas" ee dalalka laga mamnuucay in dadkoodu ay safarro ku tagaan UK. Tallaabada,oo looga gol...
Ciidamada Booliska B/weyne oo gacanta ku dhigay mandooriye
Banaanbaxii Maalinta Bari dhaci lahaa oo sababo Cafimaad loo baajiyey
Kaluumeysatada Soomaaliya oo ka digay inuu nabaad guurayo noocyo kamid ah...